Sida loo Edit RMVB / dhexena waxa Video Files
> Resource > Video > Sida loo Edit RMVB / dhexena waxa Video Files
RMVB (RealMedia Bitrate Doorsoome) / dhexena (RealMedia) waa qaabab video digital in lagu soosaaray by RealNetworks ay codsiga RealPlayer. Haddii aad rabto in aad wax ka bedel RMVB / dhexena video files, oo aad ka heli kartaa in badan oo danabka video tafatirka caan ah ma ciyaari taageero noocyada sida RealPlayer video files. Si kastaba ha ahaatee, weli waxaad ka heli kartaa doorashada adag ee software in does- in ay Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) . In this article, waxaad ku baran doonaa sida loo edit RMVB / dhexena video files la.
1 dar RMVB / dhexena video files
Si aad u bilaabaan oo leh, bilowdo Video Editor. Markaas sanduuq arbushin doonaa in aynu aad doorato saamiga dhinac u dhexeeya 4: 3 iyo 16: 9. Ka dib markii in, riix "Import" button ku darto RMVB / dhexena waxa videos guddi ugu weyn. Haddii aad rabto in aad sawirada iyo files audio dari ay la socdaan files video, si markaas aad xaalkaa karaa kuwa, guji "Import" badhanka ku darto, sidoo kale. Ama waxaad si toos ah jiidi-n-tagi karaan iyaga guddiga ugu weyn.
2 Edit RMVB / dhexena waxa videos ay ku daray saamaynta kala duwan
Hadda jiidi oo hoos u RMVB / dhexena waxa videos, sawirada iyo files audio in waqtiyada dhiganta guddi tafatir ah. Markaas si tallaabo ka dalbato kala guurka iyo saamaynta waannu tegi doonnaa. Riix si gooni gooni ah oo ku saabsan "guurka" iyo "Saameynta" badhamada uu ka soo xusho tirada saamaynta yaab leh. Si aad u codsato saamaynta, kaliya jiidi ay ka ama saamayn aad u baahan tahay iyo hoos u iyaga on waqtiga.
Riix ah "Text" button iyo dooran style caption maktabadda ah. Markaas nooca qoraalka in muuqan doonaa video ah. Markaas riix "Intro / Credit" button ku darto Intro / credits in video ah.
Waxa kale oo aad codsan kartaa sawir-in-sawir saamayn haddii aad rabto. Kaliya dooro mid video iyo hoos u waqtiga PIP ah, ka dibna ay ula qabsadaan xajmiga iyo booska sida aad jeceshahay. Video Editor Gelineya inaad la isugu daro in 12 videos in waqtiga PIP ah.
3 dhoofinta ee saxar RMVB / dhexena video files
Ka dib markii sixiddiisa RMVB / dhexena oo dhan arrimood, oo kaliya ku dhacay "Abuur" oo aan aad tallaabada final - dhoofin faylasha. Video Editor Bixisaa wax soo saarka siyaabo dhowr ah:
Ka dooro "qaabab" tab si loo badbaadiyo saxar RMVB / dhexena video files qaabab kala duwan ama "Qalabka" tab inay u dhoofiyaan oo ay daawadaan faylasha ku saabsan qalabka warbaahinta la qaadi karo sida iPod, iPhone, iwm Haddii aad u baahan tahay si ay u gubaan RMVB ka saxar / Khadka dhexena waxa ay u DVD, doortaan "DVD" sida wax soo saarka. Dabcan sidoo kale si toos ah aad gali kartaa files si ay u YouTube ama Facebook ee "YouTube" tab.
Sida loo Edit Video Duuban
Video Editor U Mavericks: Sida loo Edit Videos in OS X Mavericks
Top 5 Alternative si download qabashada video
Hel Best 64-yara Video Converter ah Windows
Hel Software Great 1080p Video ayeey si Edit 1080p Videos
Sida loo Beddelaan WLMP Faylal ay si MP4
Sida loo Beddelaan MKV in MP3
Hel Video inay DVD on Windows / Mac (Mavericks waxaa ka mid ah - Best Video inay DVD gubidda